सर्वश्रेष्ठ 24 मित्र टेटटोस डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
सर्वश्रेष्ठ पुरुषहरु र महिलाहरुको लागि 24 मित्रता टैटू डिजाइन आइडिया
sonitattoo अगस्ट 22, 2016
जब तपाइँ नजिकको पार्टनरमा स्ट्राइकिंग र लामो समयसम्म टिक्दो प्रभाव बनाउन चाहानुहुन्छ, एक ट्याटू प्रतिनिधित्वले तपाईंलाई सहयोग पुर्याउनको लागि लामो बाटो लाग्न सक्छ। यो टटूमा हेर्नुहोस्। यो तिमीलाई के भन्छ?
त्यहाँ कुनै झूटो छैन कि #tattoo संसार भर पुरुष र महिलाहरूको एक महत्वपूर्ण पहिचान भएको छ। हामी अघिल्लो दशक भन्दा टाटाटोसहरू संग धेरै व्यक्तिहरू देखिरहेका छौं किनभने रचनात्मकता को लागी टैटूको साथ आउँछ।
सुपर मित्रता टैटू
कलाकारहरू जसले यी रेखाचित्रका लागि उत्तरदायी छन् तपाईँलाई ट्याटोस प्रदान गर्न प्रशिक्षित गरिएको छ जुन सधैँ भीडमा उभिन सक्दछ।
प्यारा मित्रता टैटू
स्वाद र व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू दुईवटा कारक बनेका छन् जसले टान्टोको प्रकारलाई प्रभाव पार्न सक्दछ।
समूह मित्रता टैटू
लागत केहि छ कि मानिसहरु पहिलो पटक बिस्तारै जाने को लागी विचार गर्दछन्। यदि तपाइँ यो टैटू खर्च गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने, यो प्राप्त गर्न राम्रो विकल्प हुन सक्छ। टैटू प्राप्त गर्ने लागत तपाईंको बजेटमा निर्भर गर्दछ।
मीठा मित्रता टैटू
एक प्रश्न यो हो कि मान्छे यस तरिका को टैटू प्राप्त गर्नु पहिले पूछना टैटू को लागत को बारे मा जान्छ। यदि तपाइँ बुझ्नुहुन्छ भने यसको बारेमा महत्त्वपूर्ण छ ट्याटु प्राप्त गर्न सजिलो छ।
साधारण मित्रता टैटू
कलाकार जो टटुट खिच्ने एउटा अत्यावश्यक कारक हो जसले तपाईंलाई प्राप्त गर्न सक्ने रेखालाई असर गर्दछ। त्यहाँ धेरै कलाकारहरू अनलाइन छन् र तपाइँको बजेटको अनुसार मात्र एक राम्रो र किफायती एक छनौट गर्न यो हो।
तितली मित्रता टैटू
केही भन्दा धेरै अनुभवी कलाकारहरू एकदम कम वा कुनै कौशल संग कलाकारको तुलनामा किराया गर्न महँगो हुन सक्छ।
अद्भुत मित्रता टैटू
त्यहाँ प्रतिष्ठित कलाकारहरू छन् जसले घण्टापछि आधारमा चार्ज गर्दछ र यो तपाईं खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ भने यो तपाईं धेरै महंगी हुन सक्छ।
तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि उच्च लागत को बावजूद, एक पेशेवर कलाकार शामिल छ भने, एक चौंकाने वाला टैटू समाप्ति परिणाम हो।
यो एक टटू सुपर सुन्दर छ र केवल एक पेशेवर टैटूस्ट को तालिका बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ जो तपाईंलाई सुपर टैटू #designs दिन सक्छ
सुपर प्यारा मित्रता टैटू
यदि तपाईं यस्तो सुन्दर टैटू लिन सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यसको मतलब यो हो कि तपाईलाई एक पेशेवर कलाकारको प्रयोग गर्न को लागी तपाईलाई सहयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
हात मैत्री टटू
त्यहाँ कुनै कुरा छैन कि तपाईंको टैटू कसरी सुन्दर देख्न सक्छ जब तपाईसँग सही कलाकार र तपाइँको स्याङ्किङ्गको लागि उत्तम स्थान छ,
त्यहाँ सैकड़ों ट्याट डिजाइनहरू अनलाइन छन्। तपाईं यसलाई अनोखा र असाधारण बनाउन आफ्नो ट्याट अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
जीवन धेरै रमाइलो भएको छ किनकी धेरै अभिव्यक्तिहरु जुन प्रेम कला बाट आउँछ। छवि स्रोत
मित्रता टैटूसँग मेल खान्छ
ट्याटुले यो सम्भव बनाएको छ र हामी सधैँ यी सुन्दर ब्यक्ति जस्ता ट्याटोसहरू संग प्राप्त गर्न सक्दछौं भन्ने सँधै प्रशंसा गरिरहेका छौं। तिम्रो के बिचार छ? छवि स्रोत
ब्यान्ड मित्रता टैटू
मित्रता टैटू मित्रता मनाउने तरिका बनिरहेको छ। तपाईं एक टटू हुन सक्छ जुन तपाईंलाई शोर बनाउन बिना प्रेम व्यक्त गर्न मद्दत गर्दछ। साथीहरूसँग उनीहरूको बन्धनमा बलियो तरिकाले जीवन सुन्दर भएको छ। छवि स्रोत
फिंगर मित्रता टैटू
यी ट्याटटोहरू मध्ये कुन कुराले तपाईंको साथीको बारेमा कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर बताउनेछ? त्यहाँ धेरै डिजाइनहरू छन् जुन तपाइँ यो ट्याटुको प्रकारको आउँदो हुँदा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि साथी एक व्यक्ति हो जुन तपाईं धैर्य राख्नुहुन्छ। छवि स्रोत
लिट मित्रता टैटू
यो प्रेम सम्बन्धी बन्धनलाई बलियो बनाउन को लागी, तपाईं साबित गर्नका लागि एक मिल्दो टटू हुन सक्नुहुन्छ कि यो दुवैको लागि सँधै एक साथ छ। ट्याटू साझा गर्नु भन्दा सुन्दर बन्न साझा गर्नु भन्दा तपाईंको बांड व्यक्त गर्ने कुनै राम्रो तरिका छैन। छवि स्रोत
हातको मित्रता टैटू
तपाई सधैँ भविष्यको बारेमा सोच्नु हुन्छ जब तपाईं एक टटुट गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाई सँगै बाँध्न जाँदै हुनुहुन्छ। छवि स्रोत
टच मित्रता टैटू
भविष्यमा धेरै चीजहरू परिवर्तन हुन सक्दछ जुन तपाईंलाई अफसोस गर्न सक्छ। अफसोसबाट आफैंलाई बचाउनको लागि, तपाईंले प्रेमको बारेमा कुरा गर्ने मसीलाई प्राप्त गर्न आफ्नो समय लिनु पर्छ। छवि स्रोत
महान मित्रता टैटू
खराब मेमोरी नामहरू, प्रारम्भिक वा मितिहरूबाट टाढा रहनु पर्ने एक डिजाइनलाई प्रभावित हुने छैन। जब तपाईंसँग एक सम्बन्ध जस्तै प्रेम छ, सजिलै हराउन सकिँदैन। त्यो बांड एक टैटू प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। छवि स्रोत
शब्द लेखिएको टैटू
लेखिएको # फ्रिशिश टैटू धेरै लोकप्रिय भएको छ। कारण यो हो कि तपाईं आफ्नो शरीरमा तपाईंको छोटो ट्याटोसमा तपाईंको जानकारी पास गर्नका लागि छोटो छोटो लेखहरू गर्न सक्नुहुन्छ। छवि स्रोत
तपाईं यस मित्रता टैटूलाई घृणा गर्न सक्नुहुन्न। यो धेरै अनौठो र सुन्दर छ। वेदनेकुराहरू जब तिनीहरूले भेट्न अचम्म लाग्दो आँखाबाट चल्छन् र तपाईं यो डिजाइनलाई माया गर्न सक्नुहुन्न। छवि स्रोत
अधिकका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मित्रता टैटू डिजाइन
कम्पास टैटूतितली टैटूहरूआस्तीन टैटूहरूअनन्तता टटूkoi fish tattooआदिवासी टैटूहरूटखने टैटूबिल्ली ट्याटोछाती टैटूहरूतीर टटूफिर्ता ट्याटोहरूwatercolor टटूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूकमल फूल टटूहात्ती टटूचन्द्र टोटोटोचेरी खिलौना टैटूसंगीत टैटूहरूक्रस टैटूहेनना टैटूयुगल टैटूहरूहीरे टैटूरिप टैटूपैट टैटूसिंह टटटोहरूगुलाब टैटूहरूसूर्य टैटूहरूएंकर टैटूहरूहात टाटाटोसप्यारा टैटूहरूपक्षी टैटूहरूपुरुषहरूको लागि टैटूफूल टैटूहरूज्यामितीय ट्याटुहरूप्यार टैटूबहिनी टैटूहरूटैटू विचारहरूओटोपस ट्याटूmehndi डिजाइनसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूआँखा टटूदूत टैटूगर्दन टैटूहरूबिस्कुट टटूFeather Tattooट्याटुहरू केटीहरूको लागिहात ट्याटोसहृदय टटटोक्राउन टैटूहरूईगल ट्याटो